घर शिकारको लागि पहिलो पटकको होमब्युयर गाईड - रियल इस्टेट ब्लग - रियल्टी डब्ल्यूडब्ल्यू:
घर शिकारको लागि पहिलो पटकको homebuyer गाइड
मार्च 27, 2017 by Chie Suareztac, कुल अवलोकन:
फोटो द्वारा म्याट जोन्स / अनस्प्लेश
भविष्यमा चाँडै सोच्न यो रमाईलो र स्नायु-दुबै दुबै छ वा यदि तपाईं पहिल्यै पहिल्यै राख्नु भएको छ र केही महिना पछि, तपाईं आफ्नो घरको सम्पत्ति पाउन सक्नुहुन्छ। सम्भावित घरहरू खोज्न र तपाईंको सपनाको आन्तरिक कल्पना गर्न उत्साहित हुन्छ; सबै डरलाग्दो कागजातहरू र तपाईंले पूरा गर्नु आवश्यक अन्य प्रक्रियाहरू मार्फत जानु यो स्नायु-र्याकिंग हो।
जब तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईं र तपाईंको जीवनसाथी तपाईंको परिवारको लागि घर किन्न तयार हुनुहुन्छ, केहि पनि नजीक जान्दै मोडेल घरहरूमा नहस्नुहोस्। कम से कम, खरीद प्रक्रिया र पहिले नै थाहा पाउनु पर्ने चीजहरूको बारेमा आधारभूत ज्ञान जम्मा गर्न केहि अनुसन्धान गर्नुहोस्।
तपाईको धितो for approved को लागी स्वीकृत हुने बित्तिकै तपाईलाई थाहा हुन्छ तपाई घर शिकार गर्न सक्नुहुनेछ। र एकचोटि तपाईंले गर्नुभयो भने, आफैंलाई एजेन्ट बनाउँदै आफैलाई केही समय र कठिन खोजको समस्या बचत गर्नुहोस्।
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं सम्पत्ति किन्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ र एजेन्ट बिना नै बाटोमा सानो हिचकीहरू भेटिन्छ, तपाईको चाल के हो र तपाईलाई यस मुद्दाको बारेमा कत्ति थाहा छ र कसरी यसलाई ठीक गर्ने? एजेन्टहरूले यी परिस्थितिहरूको अनुभव गरेका हुन सक्छन् र यसका बारेमा तपाईंसँग बढि ज्ञान छ, तिनीहरूले तपाईंलाई वास्तवमै के हुँदैछ भनेर सल्लाह दिनेछन् र तिनीहरूले तपाईंलाई के गर्ने सल्लाह दिनेछन्।
धेरै व्यक्तिहरू सोच्दछन् कि एजेन्ट प्राप्त गर्न तपाईंको वालेटमा दाँत खर्च गर्दछ। सत्य यो हो कि यी एजेन्टहरू विक्रेताहरू द्वारा एक पटक घर बेचेपछि कमिशन गरिन्छ। त्यहाँ एकचोटि तपाईंले यो महसुस गरेपछि भुक्तानको बारेमा चिन्ता लिने आवश्यकता छैन।
चीजहरूलाई हतार नगर्नुहोस्
कुनै चीजलाई हतार गर्नुपर्दैन खास गरी यदि तपाईं बाटोमा बच्चा हुनुहुन्छ भने। तपाईंलाई थाहा छ, एक्लै त्यो सोचाइको दबाबले तपाईंको परिवारको लागि सही घर खोज्ने क्रममा तपाईंले विचार गर्नु पर्ने अन्य सबै कारकहरूसँग सम्झौता गर्न सक्छ।
तपाईलाई आवश्यक पर्ने सबै समय लिनुहोस्, तपाइँ सबै समय होइन लाग्छ त्यहाँ छ। घर किन्नु भनेको मलमा केवल एक टहल मात्र होइन। यो केवल एउटा घर मात्र हो - यो एक लगानी हो। छिमेकको वरिपरि हेर्न समय लिनुहोस्, फरक ठाउँमा हेर्नुहोस्, दोस्रो वा तेस्रो विचार प्राप्त गर्नुहोस्, राम्रो प्रिन्ट पढ्नुहोस्, र त्यस्तै। यदि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंले आफ्नो चेकलिस्ट गर्नुभयो र तपाईं वास्तवमै यसलाई किन्न तयार हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि ट्रिगर तान्ने समय छ।
तपाईंले घरको शिकार गर्नु अघि, पहिले तपाईंको बजेटको राम्रो पकड प्राप्त गर्नुहोस् र तपाईंको सपनाको घरको साथ धेरै संलग्न नहुनुहोस्। यदि तपाईंको बजेटले अनुमति दिन्छ भने, त्यो सपना वास्तविकतामा निर्धक्क बनाउनुहोस्। कुनै दिमाग को नियमको रूपमा: तपाईंको अपेक्षाहरू र बजेटको साथ व्यावहारिक हुनुहोस्।
वास्तविकता यो हो, यदि तपाईंसँग धेरै सीमित बजेट छ भने, तपाईं आफ्नो सपनाको घरमा बस्न सक्नुहुन्न। यससँग, तपाईले सम्झौता गर्नुपर्नेछ र केही पछाडि स्केल गर्नु पर्छ। यो बेडरूम को लागी एक विशाल बाथरूम वा एक कालीनमा कडा काठको फर्शको अर्थ हुन सक्छ। जस्तोसुकै परिवर्तनहरू भए पनि यसले तपाईंको घरलाई भस्म पार्दैन त्यसैले सजीलो लिनुहोस्। यो तपाईको पहिलो घर हो, संभावना छ कि तपाई यहाँ सँधै बाँच्न सक्नुहुन्न। यदि यो तपाईंको वित्तीयको सुधारको लागि हो भने, जबसम्म तपाईं आरामपूर्वक बस्नुहुनेछ, सम्झौता गर्नुहोस्।
एक पहिलो सामान्य गल्तीहरूमध्ये पहिलो पटक घरमालिकहरू बनाउँदछ जब सम्भावित घर खोज्दै छिमेकीहरू जाँच्न स्किप गरिरहेछ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले यस चरणलाई बेवास्ता गर्नुहोला अन्यथा, शान्त वातावरणको वरिपरि निद्रा रातहरू प्रस्तुत गर्न तयार गर्नुहोस्; वा असुरक्षित स्थानको कारण रातमा आतंकले भरिएको छ।
केही घण्टा वा एक दिन लिनुहोस् आसपासका हिड्न र अवलोकन गर्नुहोस्। के तपाईं आफूलाई समुदायमा बसिरहेको देख्नुहुन्छ? के तपाईं आफैं त्यहाँ वरिपरि हिंडिरहेको देख्नुहुन्छ र आफु र आफ्नो परिवार छरमा बढेको देख्नुहुन्छ? तपाईंले आफ्नो खरीद लक गर्नु अघि, स्थान अन्वेषण गर्नुहोस् र सुनिश्चित गर्नुहोस् कि यो सुरक्षित रहनको लागि सुरक्षित ठाउँ हो।
घर निरीक्षण गर्ने विचार गर्नुहोस्
यद्यपि अधिकांश राज्यहरूले घरसँग कुनै पनि सम्पत्ति मुद्दाहरूको खुलासा गर्न आवश्यक छ, घर निरीक्षण सेवा सञ्चालन गर्नु सधैं सुरक्षित हुन्छ घरलाई कुनै गोप्य संरचनात्मक समस्या हुँदैन कि विक्रेताहरू टेबलमा ल्याउन असफल हुन्छन्। यदि तपाईं त्यहाँ लामो समयको लागि बस्नुहुन्छ भने, यो यो निरीक्षण गर्न लायक छ र सम्पत्ती मालिकले जे पनि समस्याहरू पत्ता लगाइएका छन् ठीक गर्न लगाउनुहोस्।
तपाईंको सबै वार्ता र सम्झौताको नोट लिनुहोस्
राम्रो प्रिन्ट पढ्नुहोस् र कागजमा जे जस्तो कुराकानी र सम्झौता तपाईं र विक्रेताले सहमत गर्नुभयो लेख्नुहोस्; र तिनीहरूलाई योमा हस्ताक्षर गराउनुहोस्। यदि तपाईंसँग यो कागजमा छैन भने, यो प्राविधिक रूपमा अवस्थित छैन।
अरू कुन सल्लाह र सल्लाहहरू जुन तपाईं पहिलो पटक घर खरीददारहरूसँग साझेदारी गर्न चाहनुहुन्छ? हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्!
ची सुआरेजको बारेमा
ची सुआरेज एक लेखक / ब्लगर को लागी हो Wincrest Homes, एउटा कम्पनी जसले सिडनी, सेन्ट्रल कोस्ट, न्यूकासल र हन्टर क्षेत्रहरूमा आधुनिक परिवार घरहरू बनाउँदछ। ची घर डिजाइन र सजावट मा गहिरो चासो छ।
खरीद प्रक्रिया र पहिले नै थाहा पाउनको लागि आधारभूत ज्ञान भेला गर्न केहि अनुसन्धान गर्नुहोस्।
Chie Suareztac मार्च 27, 2017
यो प्रविष्टि मा पोस्ट सार्दै, घर जग्गा लगानी, रियल एस्टेट बेच्ने र ट्याग घर शिकार सल्लाह, आवास बजार, आवास बजार प्रवृत्ति, आवास सम्पत्ति, घर जग्गा सल्लाह। बुकमार्क को Permalink.
फेब्रुअरी 13, 2017 Ge विशाल प्रचलनहरू जुन यस बर्ष आवास बजार स्वीप गर्नेछ हामी २०१ 2017 को पहिलो क्वार्टरमा एक महिना पहिले नै छौं र तपाईको रिजोलुसनहरू खेलमा आउँदा, तपाईले अर्को महत्वपूर्ण माइलस्टोन थप्न चाहानुहुन्छ - तपाईले प्राप्त गर्नुपर्दछ — घरमालिक। आवास बजार धेरै वर्ष पहिले एक रियल ईस्टेट संकट पछि स्थिर भएको हुन सक्छ तथापि, हामी हाम्रो समय र पैसा खर्च गर्दैनौं। यस वर्ष अन्तमा आफैंलाई र / वा तपाईको परिवारलाई सुहाउँदो सुन्दर र आरामदायक नयाँ घर (वा तपाईको पहिलो!) उपहार दिन। सहस्राब्दीहरू चलिरहेका छन् […] पोस्ट रियल एस्टेट व्यवसाय
नोभेम्बर 18, 2017 एक दिनमा तपाईको घर कसरी बेच्ने घर बेच्न कठिन काम हो, विशेष गरी यदि तपाईं यसको प्रक्रियाको बारेमा अज्ञात हुनुहुन्छ भने। तपाईं घर बेच्न चाहानु सक्नुहुन्छ तर तपाईंसँग बजारको बारेमा ज्ञानको अभाव पनि हुन सक्छ। कहिलेकाँही घर बेच्न को लागी धेरै जरुरी छ। यो प्रायः ती अवस्थाहरूमा हो जहाँ बासिन्दाहरूले देशबाट बाहिर वा अर्कै शहरमा जान योजना गरिरहेका छन्। त्यस्ता अवस्थाहरूमा तपाईंले घर तुरून्त बेच्न आवश्यक छ। यो त्यस्तो चरममा जान सक्छ कि तपाईं गर्नुहुन्छ […] पोस्ट रियल एस्टेट बेच्ने
जुलाई 7, 2017 घरको भविष्यका लागतहरू आवास बजारको साथ यो एक दशकमा भएको सबै भन्दा राम्रो हो, अब खरीद गर्ने समय छ। चाहे तपाईं आफ्नो पहिलो घर किन्नको लागि खोज्दै हुनुहुन्छ, छुट्टीको घर खोज्दै हुनुहुन्छ, वा सेवानिवृत्तिका लागि आकार घटाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, घर खरीद गर्नु भविष्यको लागि सधैं लगानी नै हुन्छ। घर खरीद गर्दा यो घरको प्रमुख सामान्य जाँचहरूको लागि सधैं महत्त्वपूर्ण हुन्छ। छाना चुहाउँछ? के प्लम्बरिंग राम्रो अवस्थामा छ? के जग बलियो छ? सबै आवश्यक प्रश्नहरू सोध्नु, तर हामी आफैंलाई […] पोस्ट घर जग्गा लगानी
नोभेम्बर 18, 20179घर खरीद र बिक्रीको लागि सुझावहरू घर बेच्न सबैभन्दा ठूलो आर्थिक लेनदेन भएको छ र यसैले गाह्रो छ। तर एउटा घर किन्नु नबिर्सनु पनि कुनै कुरा कम छैन। हामी यहाँ तपाईंलाई tips सुझावहरू प्रदान गर्दैछौं जुन तपाईंले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं समान समयमा खरीद-बिक्री गर्नुपर्नेछ। पहिले बेच्नुहोस्, त्यसपछि खरीद गर्नुहोस्: विशेषज्ञहरूले सुझाव दिन्छन् कि पहिले तपाईंको घर बेच्नुहोस् र त्यसपछि नयाँ खोज्नुहोस्। यो main मुख्य कारणका लागि लाभदायक भएको छ। पहिलो यो हो कि तपाईंले कति पैसा पाउनु हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुनेछ कि [getting] पोस्ट घर जग्गा लगानी
फेब्रुअरी 7, 2017 लन्डन आवास र सम्पत्ति मांग। नम्बरहरू, टिप्पणीहरू र प्रचलनहरू भाँडादार वा घरमालिकहरू? London०% भन्दा बढि ती सबै मानिसहरु जो लन्डनमा बस्छन् र अझै पनि घरका मालिकहरू छैनन्, यस तथ्यलाई स्वीकार्न देखिन्छ कि लन्डनमा तपाईको आफ्नै घर / सम्पत्ति किन्नु गाह्रो विकल्प र अवरोधहरूले भरिएको मार्ग हो। स्वतन्त्र अनुसन्धानका अनुसार लण्डनको जनसंख्याको वर्तमान घाता growth्गी वृद्धिको कारण, आवास बजार भित्र माग बढ्नको लागि निश्चित मार्गमा रहेको देखिन्छ। आशा र उमेर। के व्यक्तिहरू छोडिन्छन् वा व्यक्तिहरू अनुकूल गर्छन्? यहाँ के मैले […] पोस्ट रियल एस्टेट व्यवसाय
सेप्टेम्बर 22, 2016 पूर्ण नयाँ स्थिति प्राप्त गर्न वास्तविक घर जग्गा बजार जब बिहीबार व्यापार शुरू हुन्छ, रियल इस्टेटले बजारमा नयाँ महत्त्व राख्दछ। घर जग्गा को MSCI र S&P डो जोन्स सूचका अनुसार यसको आफ्नै वर्ग दिइनेछ, र यो वास्तवमा वित्तीय क्षेत्र भित्र बाँकी कोटिहरु बाट स्वतन्त्र हुनेछ। यो बिभिन्नता एक क्षेत्र को रूप मा घर जग्गा राम्रो काम गरेको छ भन्ने तथ्यलाई एक परिणाम हो, वास्तवमा S&P 500 भन्दा राम्रो। S&P को REIT उद्योग सूचकांक […] पछि देखि प्रत्येक वर्ष २ percent प्रतिशतले वृद्धि भएको छ पोस्ट घर जग्गा वित्त
अगस्ट 5, 2016 First चीजहरू तपाईको पहिलो घर खरीद गर्नु अघि जान्नुपर्दछ भविष्यमा चाँडै सोच्न यो रमाईलो र स्नायु-दुबै दुबै छ वा यदि तपाईं पहिल्यै पहिल्यै राख्नु भएको छ भने, केही महिना पछि, तपाईं आफ्नो घरको सम्पत्ति पाउन सक्नुहुन्छ। सम्भावित घरहरू खोज्न र तपाईंको सपनाको आन्तरिक कल्पना गर्न उत्साहित हुन्छ; सबै डरलाग्दो कागजातहरू र तपाईंले पूरा गर्नु आवश्यक अन्य प्रक्रियाहरू मार्फत जानु यो स्नायु-र्याकिंग हो। जब तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईं र तपाईंको पति तपाईंको परिवारको लागि घर किन्न तयार हुनुहुन्छ, मोडेल घरहरूमा नजिक नजानुहोस् […] पोस्ट घर जग्गा लगानी
नोभेम्बर 18, 2017 घर जग्गा एजेंटलाई काममा लिनु अघि7प्रश्नहरू सोध्नु पर्छ तपाईंले साईट खोल्नुभएको हुनसक्छ किनकि तपाईं या त आफ्नो घर बेच्दै हुनुहुन्छ वा खरीद गर्दै हुनुहुन्छ। यदि त्यसो हो भने तपाईलाई निश्चित घर जग्गा एजेन्ट चाहिन्छ। अब तपाईले कस्तो राम्रो ईस्टेट एजेन्ट भाँडा लिन खोज्नु पर्छ? हामी यहाँ तपाईंलाई प्रश्नहरू प्रदान गर्दै छौं तपाईंले कसैलाई काममा लिनु अघि तपाईंले सोध्नु पर्ने प्रश्नहरू। कति लामो? सबैभन्दा पहिला र सबैभन्दा पहिलेको प्रश्न यो हो कि उनी कति लामो समयदेखि यस डोमेनमा काम गर्दै आएका छन्? यदि तिनीहरू ताजा छन् भने त्यहाँ एक 100% संभावना छैन कि तिनीहरू असफल हुनेछन् तर तपाईं चाहनुहुन्न […] पोस्ट रियल एस्टेट व्यवसाय